Ayifuni kuze kufike ezibalweni iPirates ngokudlulela phambili kwiConfederation Cup - Impempe
Ayifuni kuze kufike ezibalweni iPirates ngokudlulela phambili kwiConfederation Cup
UHappy Jele nozakwabo ejimini kuleli viki
Ngokwezibalo, i-Orlando Pirates seyidinga ukuwina owodwa kule midlalo emibili eyisalele eqoqweni layo kwiCaf Confederation Cup ukuze iqinisekise indawo yayo emzuliswaneni olandelayo.
IBucs yiyo ezihola phambili kuGroup A ngamaphuzu ayisishiyagalombili, futhi ayikehlulwa nakanye. Ilandelwa yi-Enyimba yaseNigeria ngamaphuzu ayisithupha kanti i-Al Ahly Bengazhi yaseLibya ne-ES Setif yase-Algeria bona banamaphuzu amane iqembu ngalinye.
Womane lamaqembu asenethuba lokudlula kuleli qoqo, yize izibalo zivuna kakhulu iPirates ne-Enyimba. Yingakho ukaputeni weBucs, uHappy Jele ethi abafuni kuyiwe emdlalweni wokugcina kusenokunngabaza.
Uthi bafuna ukuwina ngoLwesithathu uma sebebhekene ne-ES Setif e-Orlando Stadium ngo 3 ntambama, ukuze baye eNigeria sebeyiphethile eyabo imbenge.
“Umdlalo okufanele siwuwine lo ukuze sibe sendaweni enhle (yokudlulela phambili) kwazise umdlalo wokugcina esigabeni samaqoqo osekuhambeni.
“Besisenza kahle okwamanje futhi nokuzethemba kuphezulu. Sithole umphumela omuhle ngempelasonto (kwiDStv Premiership) ngakho wonke umuntu unomuzwa okahle,” kusho uJele.
“Kubaluleke kakhulu kithi ukuthi siqede siphezulu eqoqweni lethu ngoba sifuna kungangabazeki ngokungena kwethu esigabeni esilandelayo. Siyakufuna ukudlulela phambili,” kucacisa yena.
Nomqeqeshi wePirates, uJosef Zinnbauer uhambe emagameni kaJele, wathi ukuzebazehlisele isisindo somsebenzi emdlalweni wokugcina, kumele banqobe Lo wangoLwesithathu.
“Ubalulekile lo mdlalo, esikufunayo kuwo amaphuzu amathathu. Uma siwathola lamaphuzu sizobe sesazi umsebenzi sesiwufezile, bese siya emdlalweni olandelayo sesikhululekile.
“Kodwa lokho akusho ukuthi sizobe sesiphelelwe yingcindezi ngoba leyo yinto ehlezi ikhona kuyo yonke imiqhudelwano,” kusho lo mqeqeshi odabuka eGermany.
“Okuhle nje wukuthi bonke abadlali sebeyayiqonda le ngcindezi futhi sebeyayithokozela. Asikahlulwa (kuleli qoqo) ngakho siyazethemba futhi sifuna ukuqhubeka kanjalo nasemdlalweni olandelayo – sithole imiphumela emihle.”
Lo mqeqeshi ukuqinisekisile ukuthi oGabadinho Mhango noThulani Hlatshwayo abebengekho beshaya iMaritzburg United ngo 2-0 emdlalweni weligi ngeSonto ngenxa yokumiswa bazobe sebekhona. Lo mdlalo uzokhonjiswa bukhoma kwiSABC 1.
Previous Previous post: IChippa ingase ishone ehlathini igodle iNedbank Cup
Next Next post: Imali ibuyisele uHeric kwiChippa, phela ayiluthezi olumanzi